မင်း​ဖြေကြည့်ပါ ဘာဆန်ဂျာ – The Art Garden Rohingya
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူ့တန်ဖိုး​တွေကဘယ်မှာလဲ ဘာဆန်ဂျာ?
ငါတို့ချစ်တဲ့ အကို​တွေ၊ ညီမငယ်​တွေ၊
အ​မေအို​တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ ငါတို့အတွက်
ကိုယ်ကြီးပြင်းရာ ဒေသ၊ အစစအရာရာ အသားကျ​နေတဲ့ အရပ်ကို ဘယ်သူကစွန့်ခွာချင်ပါ့မလဲ ဘာဆန်ဂျာ..
ဒါဆို ငါတို့ဘာလို့ ဒီ​ရောက်​နေလဲလို့​တော့မ​မေးပါနဲ့။
ငါတို့က စွန့်ခွာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ကို ခွေးလိုနွားလို၊ အမှိုက်သရိုက်လို
အောင်ပွဲခံ​နေကြတဲ့ လူတစ်စုကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက် ရဲရဲကြီးမေးလိုက်စမ်းပါ ဘာဆန်ဂျာ….
Tags: Bashan CharRebelRelocationRohingya Refugee
Editaror fonsón Rohingya Kavya5wá, Nowambor 2020.